Fadeexada 2013: Guddoomiyaha Gobolka Bari Oo Codsanaya Laaluush Dhan 20 Kun Oo Doolar (Dhegayso) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Fadeexada 2013: Guddoomiyaha Gobolka Bari Oo Codsanaya Laaluush Dhan 20 Kun Oo Doolar (Dhegayso)
Fadeexada 2013: Guddoomiyaha Gobolka Bari Oo Codsanaya Laaluush Dhan 20 Kun Oo Doolar (Dhegayso)
Posted: Hanad Askar - January 2, 2013
Guddoomiyaha G/bari Cabdisamad Gallan
Qoraalkan waxaa diyaariyey Maxamed Siciid Cumar (Kashawiito) oo ahaan jiray agasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, balse wixii ka danbeeyey wakhtigii uu shaqada maamulka ka tegay wuxuu ku mashquulsanaa arrimaha Bini-aadanimada, wuxuuna la shaqeynayey urur wadani ah oo lagu magacaabo (CASO) kaasoo raashin gaarsiin jiray degmooyinka Caluula iyo Qandala, haseyeeshee, ay hawshaasi istaagtay kadib markii khilaaf uu soo dhex galay xubno Board-ka ka mid ah, arrintuna ay gacanta u gashay Guddoomiyaha Gobolka Bari oo laga sugayey in uu xaliyo, balse taas uu ku bedelay in caqabadaas uu sii cusleeyo, codsadayna lacag laaluush ah.
Qoraalka oo iftiiminaya wax badan ayaa waxaa ku lifaaqan codka Guddoomiyaha Gobolka Bari C/samad Maxamed Gallan oo codsanaya lacag gaareysa 20 Kun oo doolar.
Waxaa lama huraan ah kolkii ay xaaladi ku adkaato bulshada oo la furdaamin waayo in ay ula gudbaan xafiisyada dowliga ah si loo furdaamiyo arrimaha murugsan ee shicibku u taag waayaan xalintooda, waxaase murugo noqonaysa kolkii masuulka fadhiya xafiiska baahida weyn loogu tegay uu muwaadinka cabanaya maqashiiyo wax dhegihiisu mashiiqsadaan.
Xafiiska Maamulka Gobolka Bari ee magaalada Boosaaso wuxuu ka mid yahay xarumaha ugu muhiimsan ee dowlidda Puntland muraayada u ah, waxay aheyd markii ugu horeysay noloshayda ee ay arrini ila gudo gasho, waxaanse ka soo baxay anigoo dhekafaarsan.
Waxaa ayaan darro ah in Xarunta Gobolka Bari oo aan horay loogu aqoon ay noqtay golaha Laaluushka, musuqmaasuqa iyo eexda sida uu hadaladiisa uu ku qirayo C/samad Maxamed Gallan oo ah Guddoomiyaha Gobolka Bari, 20 Kun oo Doolar waa lacag aad u fara badan, waana wax ka weyn in laaluush loo kala qaato kolka Afrika la joogo, weliba Soomaaliya oo xaalad qalafsani ay ka jirto maanta.
Markaan arrimahaas ogaaday ayaan door biday in aan Mobile-kayga ku duubo inta uu ka qaban karo hadalada aad ka nixi doontaan ee ka sunsumaya afka Gudoomiyaha gobolka Bari C/samad Maxamed Gallan.
“ Barasaab ahaan, ma aha C/samad ahaan, waa Taytalka waxa la iigu dhiibaayo masuuliyada. 20-kun ayaan aniga Accounka kula harayaa…….”
Erayadan ka soo baxay afka Guddoomiyaha ayaa ah kuwo laga naxo, waayo lacagta uu sheegay in uu kula harayo Acounkiisa waa lacag ay leeyihiin dad masaakiin ah oo shaqaale ka ah degmooyinka Caluula iyo Qandala, kuwaasoo ka shaqeynayey hawlo samafal ah oo raashin lagu gaarsiinayey degmooyinka Caluula iyo Qandala, oo aan ka ahaa hawl fuliyeeen. Markii aan ka diiday dalabkan naxdinta leh ayuu ii soo jeediyey in lacagta aan Saddex meelood u qaybsano sida aad hadaladiisa ku maqli doontaan, waxayna igu aheyd arrin la yaab leh, maadaama uu ka libiqsan waayey Wasiir ka tirsan dowladda Puntland oo fadhiyey goobtii uu Guddoomiyuhu laaluushka nagu weydiisanaayey.
Sidaas awgeed, waxaan door biday in aan bulshada iyo maamulka sare ee dowladda Puntland u soo bandhigo masuulka Gobolka Bari loo dhiibay oo afkiisa ku caddeynaya in uu ku shaqeeyo cadaalad daro lala og yahay, ayna laaluushka wax ka sugayaan masuuliyiinta gobolka kala shaqeysa, kuwaasoo uu magacyadooda xusayo.
Fadeexadan oo la kowsatay sanadka cusub ee 2013 ayaa noqonaysa tii ugu foosha xumeyd ee soo wajahda Guddoomiye xil ka qabtay maamulka Gobolka Bari, waxaanse hubsan doonaa talaabada uu Madaxweynaha Puntland ka qaadi doono, iyo in damiirka Guddoomiyhuhu u ogolaan doono in uu kursiga isaga sii fadhiyo.
Dhegeyso oo Ha Mashiiqsan
Hadalkii oo qoraal ah: Guddoomiyuhu wuxuu yiri:-
1. Lacagtii idinka maqneyd, idinku waxaad raadineyseen oo barnaamijkaan aad u rabteen sow ma aheyn hantidii dadku idinku lahaayeena in aad bixisaan,
2.Diyaar ma u tihiin hantida dadku leeyihiin in aynu bixino in aynu saddex u qaybsano diyaar ma u tihiin.
3. Waxaan idinku iri waxa dadku leeyihiin waynu bixineynaa waxa soo harana Saddex baynu u qaybsaneynaa Aniga, Yuusuf, Maxamuud iyo raga gobolka ka shaqeeya iyo Khadar kuli wixii jooga oo dhan anigay igu faylayaan, barnaamijkaan sisitamka uu ku socdo iyo cadaalad daradda aan ku shaqeynayo waa laga wada war hayaa.
4. Nimanka WFP anigaa dhabarka u ridanaya ka Barasaab ahaan, ma aha C/samad ahaan waa Taytalka waxa la iigu dhiibaayo masuuliyada 20kaa Kun ayaan aniga Accounka kula harayaa.
5. Waxaa meesha taal nimanyahow waa la is tuhmi karaa, Maxamed Siciid waaguu maamulka ku jiri jiray wax wanaag ah aniga iima sameyn, hal maalin baan waxaan isugu nimid Karaama, waxaa laga hadlaayey wada Qandala ay leedahay, aniga iyo Afar nin oo aan ku jiray baan qorshaheeda keenay, xafiis baanu furnay Yuusuf Gallan iyo Sudeysi iyo aniga iyo waxaanu aheyn Gurungur, Afar baanu aheyn.
6.Kaashawiito nimankii wuxuu ahaa aniga I maagay, meesha fadhiyey ayuu ka mid ahaa, Agaasime Guud oo wuxuu ahaa Wasaaradda, dhib uma arkeyn oo raggii siyaasada ku jiray waagaas dhaqan bay u aheyd, in raga kale laga ilaaliyo in ay xeerada soo galaan, aniga wuxuu ii arkaayey nin raba mindhaa in uu meelahaas isku soo luxluxo raga intuu barto soo dhex galo, isaga anigu kuma colaadin dhibna uma arag
7.Dhedaa igula dagaalamay oo Dhedo iskuulkaygii intuu xiray oo aniga rag dhexdiis iyadoo halkaas la buuxo I maagayoo igu yiri waan ku xirayaa, wuxuu doonayna igula hadlay, xafiiska intaan ugu imid anigoo waraaq wata buu dhagax ii qaatay oo wiilashii qoryaha watay ku yiri hadduu halkaas soo dhaafo 5 xabadood ku dhifta.
Qore: Maxamed Siciid Kaashwiito.